तपाईं माया गर्नुहुन्छ। र यो महान छ! तर त्यहाँ एक समस्या छ: तपाईको प्रेमिकाको यो मान्छेमा क्रस छ। के गर्ने - यसलाई फिर्ता जित्ने वा मित्रता राख्न? हामी सँगै फेला पारौं!
जे भए पनि कति जना केटीहरूले एक अर्कालाई भाकल गर्दछन् र वचन दिन्छन् कि उनीहरूले केटामाथि झगडा गर्दैनन् (सबै पछि) मित्रता अझ महत्त्वपूर्ण!), धेरै अझै यो अवस्थामा समाप्त हुन्छन्, जुन दुर्भाग्यवस सबैले नोक्सान, झगडा र अपराध बिना आफैलाई निकाल्नमा सफल हुँदैनन्। र यो कसरी भयो? सबै पछि, चिसोको समुद्रको वरपर, र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा - नि: शुल्क केटाहरू, कसैलाई छान्नुहोस् र जीवनको आनन्द लिनुहोस्!
तर होईन - तपाईं र तपाईंको प्रेमिका यससँग प्रेममा बग्न सफल हुनुभयो! म उसलाई तुरुन्तै इन्कार गर्दछु, तर प्रेम, तपाईंलाई थाहा छ, एक जटिल युवती छ र आफ्नो टाउको यति चक्कर गर्न सक्छ कि तपाईं तुरुन्तै आफ्नो साथीलाई दिए शपथ, र मित्रता को बारेमा, र आफ्नो साथी को बारे मा बिर्सनुभयो। भावनाहरू अन्तस्करणको साथ संघर्षमा आउँछन्, र यस युद्धमा को विजेता हुनेछ - केवल तपाईं मा निर्भर गर्दछ।
पेशेवरहरू र विपक्ष - कुन अधिक महत्त्वपूर्ण छ, मित्रता वा प्रेम?
तपाईंले कसलाई छान्नु पर्छ? त्यस्ता परिस्थितिमा कहिल्यै नरहेका मानिसहरूलाई सल्लाह दिन सजिलो छ। तिनीहरूको लागि यो स्पष्ट छ कि दिनको रूपमा यो छनौट गर्न आवश्यक छ, कुनै श doubt्का, मित्रता। आखिर, तपाईंसँग अझै धेरै व्यक्तिहरू छन् - तपाईं उनीहरूलाई स्ट्याकमा स्ट्याक गर्न सक्नुहुनेछ, तर विश्वासयोग्य साथी खोज्ने प्रयास गर्नुहोस् जसमा तपाईं आफैमा भर पर्न सक्नुहुन्छ।
र कसले भन्यो कि तपाईसँग सँधै यो प्रेम छ? ठीक छ, इश्कबाई, एक वा दुई महिनाको लागि भेट्नुहोस्, जबसम्म तपाईंहरू नयाँ शौक द्वारा वरिपरि घुम्न हुँदैन, अर्को "सदाका लागि"। केवल यहाँ प्रेमिका जससँग यो सम्भव छ अप्रत्याशित खुशी साझा गर्न को लागी अब वरिपरिको हुनेछ।
हो, यो त्यस्तो हुन सक्छ, तर यो फरक हुन सक्छ। र यदि यो केटासँगको सम्बन्ध तपाईंको जीवनको उत्तम र सब भन्दा राम्रो अवधि हुन्छ भने? र यो खुशीको क्षणको लागि, तपाईं मित्रता जोखिममा डराउनुहुन्न।
त्यसो भए तपाईले केहि गर्नु भन्दा पहिले तपाईले सोचविचार गर्नु पर्छ कि के यो मान्छे तपाईको ध्यान पाउन योग्य छ? हुनसक्छ, राम्रो, उसलाई? हैन? ऊ सबैभन्दा सपनाको राजकुमार हो? त्यसोभए यसका लागि जानुहोस्!
लडाई रणनीति - चालका लागि जानुहोस्
हो, कसैलाई के थाहा छैन अगाडि के छ र कसरी उत्तम कार्य गर्ने। हुनसक्छ, सायद तपाईको मुटु। जहाँसम्म, तपाईं भविष्यमा पर्दा उठाउने प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ र यो वा त्यो निर्णयले के लिन सक्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
हामी यस तथ्यलाई लुकाउँदैनौं कि यदि एक प्यारो केटा तपाईंको प्रेमिकाको साथ तपाईंको साझा चासोको विषय बन्न गएको छ, भने तपाईं अन्तरजातीय युद्धबाट बच्न सक्नुहुन्न, र यस लडाईको नतीजा मुख्यतया तपाईंको कार्यनीतिमा निर्भर गर्दछ।
तपाईं, पक्कै पनि ब्वाँसाहरूलाई खुवाउन र भेडाहरूलाई सुरक्षित राख्न कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो, गोप्य रूपमा केटा टाँस, तर यो यस्तो तरिकामा गर्नुहोस् कि प्रेमिका न त एक सपना हो न भावना हो। यसले काम गर्न सक्दछ, तर दुई हप्ता भन्दा बढीको लागि होईन।
चाँडै उनी अझै पनि तपाईंको गोप्य षड्यन्त्रहरूको बारेमा सचेत हुनेछन् - र त्यसपछि शोडाउनलाई रोक्न सकिँदैन। सहमत हुनुहोस् कि वास्तविक साथीहरूले त्यसो गर्दैनन्। किनकि तपाईं उसलाई यसरी धोका दिन तयार हुनुहुन्न, अन्तमा इमानदार हुनुहोस् र तपाईंको इरादा सिधा बताउनुहोस्।
गैर आक्रमकता सम्झौता
यो समय हो कि तपाईंले र तपाईंको साथीले भाकल गर्नुभएको भाँडा सम्झन र उनको हृदय देखि कुरा गर्न। यो राम्रो छ यदि तपाईंको सिद्धान्तहरू एक रोमान्टिक रोमान्टिक भावनाको बखत समान रूपमा अपरिवर्तनीय छन्। त्यसोभए सबै कुरा एक वा दुई पटक मिलाउन सकिन्छ: केवल एउटै समयमा केटोलाई गेटबाट मोड्नुहोस्, र यो अन्त हो। र तपाईं आफैंलाई साथी बनाउन जारी राख्नुहुनेछ। तर यो पनि हुन सक्छ कि, तपाइँको भावनाहरूको बारेमा सिके पछि, प्रेमिका तपाइँको सबै मनाउने कुरामा हथौड़ा हुनेछ, ग्यासमा कदम छ र बाहिर फ्याँक्छ, जहाँबाट तपाइँको यो मान्छे जित्ने संभावनाहरू शून्यमा खस्नेछ।
तपाईलाई राम्ररी थाहा छ कि तपाईको साथी कती इमान्दार र महान छ, र उनी कति टाढा जान सक्छिन्। आफ्नै निष्कर्ष कोर्नुहोस्!
प्रतिस्पर्धी भावनालाई लात हाल्ने प्रयास गर्नुहोस् जसले तपाईंको प्रेमीमा तपाईंको चासो जगाउँदछ, र तपाईंले उसलाई प्राप्त गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्नुहुन्छ। के तपाईं उहाँप्रति सबैभन्दा ईमान्दार र कडा भावनाहरू हुनुहुन्छ? त्यसो भए कुनै प्रश्न छैन।
जहाँसम्म, यदि तपाईंको लागि यो अर्को क्षणिक इश्कबाजी भन्दा बाहेक अरू केही छैन, र तपाईंको साथी उहाँलाई प्रेममा हिलको टाउकोमा छ भने, उसलाई सुम्पिदिनु राम्रो होइन र? यो तपाइँको तर्फबाट एक महान काम हो, जो केवल उनको संग मित्रता मजबूत गर्दछ। यसका अतिरिक्त तपाईले यसबाट केहि पनि गुमाउनु हुने छैन।
मुख्य पात्रलाई शब्द
वा हुनसक्छ दुश्मनीको अपराधीलाई आफैलाई सोध्नुहोस्, जसमा ऊ तपाईप्रति उदासीन छैन? यो हुन सक्छ कि तपाइँको छनौट को समस्या आफै मा गायब हुनेछ।
जे भए पनि तपाईलाई थाहा छ तपाई जबरजस्ती प्यारो हुनुहुन्न। यदि ऊ तपाईको प्रेमिकासँग मोहित छ भने उसलाई के गर्ने कोशिशमा के मतलब छ? यस अवस्थामा तपाईको सहानुभूति देखाउने अर्कोलाई तपाईको ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुन्छ किनकि तपाईको ख्याल नगर्ने केटालाई लडाई गर्नु भन्दा तपाईको मिल्ने साथीलाई गुमाउनु पर्दछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ धेरै सडकहरू छन्। तपाईंले भर्खर एउटा मात्र छनौट गर्नु पर्छ जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ। तर उहि समयमा, आफैं र आफ्नो साथीसँग इमानदार हुन कोसिस गर्नुहोस्।
प्रेम फरक छ
आदर्श परिवार - यो के हुनु पर्छ?
प्रेम, ईर्ष्या, भरोसा
एउटा पुरुषसँगको सम्बन्धमा पुरुष मनोविज्ञान: कुन कुरालाई विचार गर्नु आवश्यक छ?
यदि एउटा मान्छे सिधा आँखामा देखिन्छ
58 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,416 प्रश्नहरू।